Umshini Wokusika Amatshe Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Umshini Wokusika Amatshe Wensimbi
Umshini Wokusika Ibhuloho
Lo mshini usebenzisa uhlelo lokulawula ama-microcomputer kanye nesixhumi esibonakalayo somshini womuntu, kuhlanganiswe ne-ultra-high precision encoder rotary ukuthola nokusebenzisa i-infrared device, isebenzisa i-inverter ukulawula ukondla kwesokunxele, ilungisa ijubane ngokuya kwetshe. Isebenzisa uhlelo lokuphakamisa i-hydraulic, i-combinat ...
Umshini Wokusika Ibhuloho Oguqukayo
Lo mshini usebenzisa uhlelo lokulawula ama-microcomputer kanye nesixhumi esibonakalayo somshini womuntu, kuhlanganiswe ne-ultra-high precision encoder rotary ukuthola nokusebenzisa i-infrared device, isebenzisa i-inverter ukulawula ukondla kwesokunxele, ilungisa ijubane ngokuya kwetshe. Isebenzisa uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi, ukuphakama okuphezulu ...
Umshini wokusika webhuloho ophakathi nendawo
Umshini wokusika we-Block
Lo mshini usebenzisa uhlelo lokulawula ama-microcomputer kanye nesixhumi esibonakalayo somshini womuntu, usebenzisa i-inverter ukulawula ukondla kwesobunxele, kulungisa ijubane ngokuya kwento yamatshe. Isebenzisa uhlelo lokuphakamisa umfutholuketshezi, ukuhlanganiswa kwephini lomhlahlandlela we-chrome-plated nokugqoka isihlahla somhlahlandlela, ngegebe elincane, ukugqokwa, b ...
Lo mshini usebenzisa isakhiwo esihlangene; ikhanda eliyinhloko lingazungeza i-180 degree futhi lihambe ngogesi liye phezulu naphansi. Umshini wonke unesakhiwo esihlanganisiwe, ukubukeka okuhle, imisebenzi ezinzile nokucubungula okuphezulu, okulungele ukusika onqenqemeni nokugaya amasilayidi amancane, i-lath namathayili aminyene.